Naya Drishti | कोरोना भ्याक्सिनले शरीर चुम्बक बनाएको दावी सहित भिडियो सार्वजनिक, के हो वास्तविकता ? - Naya Drishti कोरोना भ्याक्सिनले शरीर चुम्बक बनाएको दावी सहित भिडियो सार्वजनिक, के हो वास्तविकता ? - Naya Drishti
कोरोना भ्याक्सिनले शरीर चुम्बक बनाएको दावी सहित भिडियो सार्वजनिक, के हो वास्तविकता ?
जेठ २८, काठ्मान्डौं । कोरोना भ्याक्सिनको असरको विषयमा विभिन्न प्रकारका कुरा आइरहेका छन्, कतिलाई भ्याक्सिन लगाएपछि ज्वरो आउँछ, कसैलाई आउँदैन । कतिलाई अरु पनि महसुस हुन्छन्, कतिलाई केही पनि फरक लाग्दैन । तर भ्याक्सिनको असरको विषयमा भारतको नासिकका एक व्यक्तिले निकै चकित पारिदिने दाबी गरेका छन् ।